Ogaden News Agency (ONA) – Aamusnaanta waa dhibka ugu wayn ee hadda jira
Aamusnaanta waa dhibka ugu wayn ee hadda jira
Posted by ONA Admin	/ July 21, 2011
Wargaysyada ka soo baxa dalka Sweden ayaa aad wax uga qorahayay labadii saxafi ee u dhashay dalka Sweden ee la qabtay iyagoo u sii socda inay xaaladda Ogadenya iyo dhibaatada shacabka lagu hayo ay caalamka u soo tabiyaan. Wargayska Sydsvenskan oo ah kuwa sida aadka ah looga akhristo dalka Sweden ayaa maqaal cinwaakiisu ahaa midkan ka qoray xaaladda labada saxafi oo ku bilaabay sidan;
Markii dhawaantan ay ciidammada xukuumadda Itoobiya qabsadeen labada wariye ee Iswidhishka ah ee la kala yiraahdo Martin Schibbye iyo Johan Persson, waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden uu sheegay mar uu arrinkaasi ka hadlaayay ”Sida aad ogtihiin dadka Iswedhishka ah waxaan ku waaninanay in gobolkan aysan galin, sababtoo ah gobolkan waa meel khatar ah oo aan la gali karin”. Hadalkaas wasiirka dad badan ayaa ku naqdiyay. Marka si loo eego hadalkaas waa run. Wariyayaasha doonaya inay wax kasoo qoraan gobolka soomaalida Ogaadeenya waxay la kulmi karaan khatar badan. Sida marka ay wax kasoo qorayaan dadka gudaha ku barakacay ee qoxootiga ah. Arrintaas haddii aan ka faalloonno waxay nala tahay;
Waxaa iska caddaan ah in xukuumadaha kali taliska ah ay had iyo jeer isku dayaan inay qariyaan xadgudubyada xuquuqda insaanka ee ay samaynayaan taasoo ay ku qariyaan inay saxaafadda ka mamnuucaan gobolka dhibaatadu ka jirto. Waxaa kale oo caado ah in warbaahinta internetka la xidho, xuduuddada in la xidho oo la koontaroolo dadka soo galaya iyo dadka baxaya. In wariyayassha iyo qorayaasha bogagga internetka la xidho, lagu sameeyo dabagal iyo marmarka qaarkood oo la dilo. Waxay dawladaha kali taliska ahi ay sidaas u yeelayaan si aan xaqiiqada dhibaatada jirta aan caalamku u ogaannin, waddamadaasna waxaa tusaale u ah Suuriya, Baxrayn, Yaman, Liybya iyo Itoobiya.
Arrintan ayaana ah run ahantii midda khatarta ah, waxaana waajib ah in siyaasiyiinta waddamada dimuqraaddiga ah ay arrintaas si dhab ah uga hadlaan, si lammid ah sida ay u hadlayaan ururradad u ololeeya saxaafadda xorta ah iyo dimuqraadiyadda. Wariyayaasha waa in ay xaq u helaan in ay kasoo warbixin karaan xataa meelaha ay ka jiraan iska hor-imaadyada iyo dagaallada, gaar ahaan meelaha ay dadka madaniga ahi dhib la kulmi karaan. Haddii ay sidaas dhici waydo waxaa dhici karta in xuquuqda insaanka iyo nidaamka dimuqraadiga ahi ee adduunka ay khatar galaan.
Schibbye iyo Persson waa laba wariye oo khibrad wariyenimo leh waxay u shaqaynayeen si madax bannaan, wariyayaasha waxay kasoo shaqeeyeen hadda ka hor jariidadda Sweden maanta (SvD). Johan Persson waxaa sannadkii hore uu ku jiray liiska abaalgudka wariyayaasha ee ay bixiso hay,adda Laanqayrta Cas (Röda Korset) ee dalkan Sweden.
In wariyayasha si dhaqso ah loo sii daayo waa waajib buuxa. Waxaa maskaxdeenna wali kasii guuxaya wariye Dawit Isaak oo Swedish ah oo sannado badan ku jira xabsiga dalka Eritrea. Sidaas darteed waxaan dalbanaynaa in dhammaan saddexda wariye lasii daayo. Iyo sidoo kale in aan xoogga saarno in wariyayaasha adduunka meel kasta oo ay joogaan loo oggolaado inay si xor ah ku gutaan shaqadooda oo loo oggolaado inay tagi karaan meel kasta oo u baahan in laga soo warramo.
Waxaa soo tarjumay : Keenadiid Abdulaahi iyo Maxamad Xuseen.
Abdi shekh says:
waa maqaal qiimo badan si xirfadaysana loo turjumay ama badalay, waa in aan kabtaas kaga wadnaa saxaafada sweden iyo woyane ilaahay ayaa u kala dabqaaday. waa la arki ugu dambayn xaqiiqda haddii la isku dayo in la qariyo.
Niyaadda waa inaan ku haynaa Ciida uu yahay Wasiirka Arrimaha Dibadda Ee Sweden Waa Ninka Iska Lahaaa Londen Petroleum haddana magaca badashay ee Leh Africa Oil Sidaas Daraadeed Waa Qofka ugu U dhow Gumayisga Ethiopia dalka Sweden